Lesona 12 : Ny fitsarana an'i Babilona
Hodinihina mandritra herinandro: Apok. 16;17;18
Tsianjery: "Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra aho nanao hoe: Mialà aminy hianareo, ry oloko, mba tsy hiombonanareo ota aminy, ary mba tsy hisy hahazo anareo ny loza manjo azy. Fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra, ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony." - Apok. 18:4,5.
Catégorie : Lesona 12 : Ny fitsarana an'i Babilona
Sary an'ohatra anehoana ny fivavahan-diso i Babilôna. Asehon'ny Baiboly amin'ny alalan'ny tanàna i Babilôna amin'ny andro farany. Ho "ritra" tahaka ny reniranon'i Eofrata ny fanohananiny olona io tanana io, izay asehon'ny loza fahenina. Rehefa very ny fahefan'i Babilôna dia manomboka manao fahagagana ny devoly (Apôk. 16:13,14) hamitahana ny olona mba hiandany aminy amin'ny ady ataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Amin'ny fanombohan'ny ady dia hisy horohorontany lehibe, ny horohorontany izay anisan'ireo loza fito. Mahatonga an'i Babilôna hivaky ho telo toko izany horohorontany izany (Apôk. 16:18,19). Ireo toko telo ireo no fahefana eto amin'izao tontolo izao izay nitambatra mba hanohitra ny vahoakan'Andriamanitra: ny dragona sy ny bibidia avy amin'ny ranomasina ary ny mpaminany sandoka. Nivaky anefa ny fikambanan'izy ireo ka mifarana eo ny fahefan'i Babilôna.
Miresaka amintsika ny Apôk. 17,18 ny amin'ny fomba hitrangan'ny fiafaran'i Babilôna. Mialoha ny hiresahana mikasika ny faharavan'i Babilôna amin'ny andro farany sy ny anton'izay (Apôk. 17:12-18;18:1-24), ny Apôk. 17 dia milazalaza ny amin'io rafi-pivavahana nihemotra io; lazainy amin'ny hoe vehivavy janga mitaingina bibidia izany, izay miaraka amin'ireo zanany vavy, ka hitaona izao tontolo izao hanohitra an'Andriamanitra (Apôk. 17:1-11).
Babilona ilay vehivavy janga (Apok. 17:1)
Asehon'ny Apôk. 17:1 amintsika amin'ny alalan'ny vehivavy mipetraka eo ambonin'ny rano i Babilona. Midika inona ny rano araka ny Apôk. 17:15?
Ao amin'ny Baiboly, ny vehivavy dia sary an'ohatra ampiasaina hiantsoana ny vahoakan'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, ny fiangonan'Andriamanitra dia aseho amin'ny alalan'ny vehivavy virijina (Apôk. 12:1; 22:17). Ny vehivavy janga kosa no sary an'ohatra maneho ny vahoaka nihemotra sy ireo tsy mahatoky. Ao amin'ny Apôk. 17:5 dia ambara fa i Babilona lehibe izany vehivavy janga izany. Tamin'ny andron'ny TT dia niankin-doha tamin'ny reniranon'i Eôfrata ny tananan'i Babilona; i Babilonan'ny andro farany kosa dia miankina amin'ny mpanjaka sy ny olona mba hanampy azy hanao izay tiany hatao.
Vakio ny Apôk. 17:2 sy ny Apôk. 14:8 ary ny Apok. 18:2,3. Ao amin'ireo toko sy andininy ireo, iza avy no sokajin'olona miandany amin'i Babilona amin'ny andro farany?
Ny sokajy voalohany dia ahitana ireo mpanjakan'ny tany sy ireo fahefana ara-politika. Ambara ho mijangajanga amin'i Babilôna vehivavy janga izy ireo. Tamin'ny andron'ny TT, ny teny hoe fijangajangana dia nampiasaina matetika hilazana ny fivarotan-tena , ny fanitsakitsaham-bady, zay entina hanambarana ny fiodinan'ny Isiraely tamin'Andriamanitra ka nanarahany sampy (Isa. 1:21; Jer. 3:1-10). Ny fijangajangan'ny mpanjakan'ny tany amin'ilay vehivavy janga dia maneho ny fifandraisana tsy ara-dalana eo amin'i Babilôna amin'ny andro farany sy ireo fahefana ara-pôlitika.
Ny sokajy faharoa dia ireo olona ety ambonin'ny tany. Ataon'i Babilôna izay "hahamamo" ny olona amin'ny divainy, dia ireo fampianaran-diso marobe. Rehefa misotro ny "divain"'i Babilôna ny olona dia tahaka ny olona mamo. Inoan'izy ireo fa miaro azy ny fampianarany, tsy mieritreritra lalina intsony izy ireo ka mora foana ny mifehy azy (vakio ny Isa. 28:7). Ho voafitaka ny olona rehetra ety ambonin'ny tany, dia ireo izay tsy anisan'ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky.
Amin'ny andro farany dia saika ny olon-drehetra no ho voafitak'i Babilôna. Inona no ambaran'izany amintsika mikasika ny loza ateraky ny fanarahana izay lazain'ny ankamaroan'ny olona ho marina?
Ilay vehivavy janga mitaingina bibidia (Apok. 17:3)
Vakio ny amin'ilay vehivavy janga ao amin'ny Apok. 17:3. Raha nolazaina tamin'i Jaona fa mipetraka eo ambonin'ny rano maro ilay vehivavy janga dia hitany fa mitaingina bibidia izy. Ahoana no anehoan'ny sary an'ohatra momba ny rano sy ny bibidia ireo mpanohana an'i Babilona?
Raha nentina tany an'efitra tamin'ny fahitana i Jaona dia nahita vehivavy iray nitaingina bibidia mivolon-jaky. Maneho antokom-pivavahana ilay vehivavy janga, ary ny bibidia kosa dia maneho fahefana ara-pôlitika. Ny sarin'ny "fivavahana" mitaingina eo amin'ny vozon'ny "fitondram-panjakana" dia maneho amintsika fa fahefana samy hafa ilay vehivavy sy ilay biby. Nasehon'ny Apokalipsy antsika fa niara-dalana hatrany ny fivavahana sy ny fitondram-panjakana tamin'ny lasa. Hitantsika izao fa misaraka tsara ireo fahefana ireo, saingy mbola hikambana ihany izy amin'ny andro farany. Izany no antony itaingenan'ilay vehivavy flay bibidia mivolon-jaky: mba hanehoana fa hifehy ny fitondram-panjakana rehetra eto an-tany ny fahefana ara-pivavahana amin'ny andro farany.
lnona no toetr'ilay vehivavy janga manondro flay dragona sy ny bibidia avy amin'ny ranomasina ary ny bibidia avy amin'ny tany ao amin'ny Apok. 12 sy 13?
Nitafy fitafiana lafo mirentirenty ilay vehivavy janga, fitafiana miloko mena sy volomparasy izany. Nanao firavaka vita amin'ny volamena sy vato sarobidy ary perila koa izy. Tamin'ny andron'ny Baiboly dia fomba fanaon'ny vehivavy janga izany hanintonany ny lehilahy (Jer. 4:30).
Mampahatsiahy antsika ny fitafiana nanaovan'ny mpisoronabe tamin'ny andron'ny TT ny fitafian'ilay vehivavy janga, izay nahitana ny loko volomparasy, mivolon-jaky ary ny volamena (Eks. 28:5,6). Ny soratra eo amin'ny handriny: "hamasinina ho an'i Jehovah", dia mitovy amin'izay teo amin'ny hamama nanaovan'ny mpisoronabe (Eks. 28:36-38). Ny kaopy eny an-tanany dia misandoka ny fanatitra aidina tao amin'ny fitoerana masina (Eks. 30:9). Tamin'ny alalan'ny fisehoana miendrika fivavahana nataony nanerana ny tantara dia nanjary fitaovana mahery vaika teo am-pelatanan'i Satana io rafitra ara-pivavahana io hisarihana izao tontolo izao hanalavitra an'Andriamanitra. "Mamon'ny ran'ireo vahoakan'Andriamanitra izay maty noho ny amin'ny finoana izy. Izany no mampifandray an'i Babilona amin'ny andro farany amin'ny fivavahana kristianina sandoka tamin'ny Vanim-potoana Antenantenany tany Eoropa Andrefana, izay notarihin'ny fahefana papaly tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'ny Krisitianina an-tapitrisa, dia ireo izay nitoetra ho mahatoky tamin'ny filazantsara.
Iza ilay bibidia mivolon-jaky (Apok. 17:8)
Gaga i Jaona ao amin'ny Apôk. 17:6,7, rehefa nahita ilay vehivavy janga; azo heverina fa noho ny fahitany fitoviana sasantsasany eo aminy sy ny bibidia avy amin'ny ranomasina ao amin'ny Apôk. 13 izany, izay niady tamin'ireo° vahoakan'Andriamanitra sy nandresy azy (Apôk. 13:5-7). Izany fanenjehana izany no nahatonga ilay vehivavy (fiangonana) handositra tany an'efitra nandritra ny 1260 taona, tamin'ny Vanim-potoana Antenantenany (Apôk. 12:13,14).
Ampitahao ny fomba fiteny ao amin'ny Apôk. 17:8 sy ny Apôk. 13:8 ary ny Apôk. 13:3. lnona no teny mitovy? Ahoana no anampian'ny Apôk. 13:3 antsika hahatakatra ireo fizarana telo amin'ny asan'ilay bibidia mivolon-jaky amin'ny fotoana samy hafa eo amin'ny tantara?
Asehon'i Jaona antsika ilay bibidia mivolon-jaky izay "teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray" - Apôk. 17:8, avy amin'ny lavaka tsy hita noanoa, mialoha ny faharavany. Hitanao ve fa ny teny nambaran'i Jaona momba ilay bibidia mivolon-jaky dia mampiseho fa to haka tahaka ny anaran'Andriamanitra io fahefana io? Ny anaran'Andriamanitra hoe Yahveh dia midika hoe 'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy" Apôk. 1:4; vakio koa ny Apôk. 4:8. Manampy antsika hahatakatra ireo fizarana telo amin'ny asan'ilay bibidia mivolon-jaky eo amin'ny tantara ny filazalazan'i Jaona:
1. "Teo" ny bibidia, satria nisy izy tamin'ny lasa. Manondro ny asa nataon'ilay bibidia nandritra ny 1260 andro ara-paminaniana izany, rehefa nanenjika ny vahoakan'Andriamanitra ilay bibidia avy amin'ny ranomasina (jereo ny Apôk. 13:5).
2. Ny hoe "tsy eo izao" dia mampahatsiahy antsika ny fery nahazo ilay bibidia. Vokatry ny fery saika nahafaty azy (Apôk. 13:3) tamin'ny taona 1798 dia toa tsy nanana fahefana teto an-tany intsony izy.
3. Ny teny hoe "hiakatra" dia maneho fa ho sitrana ny ferin'ilay bibidia izay saika nahafaty azy, ary hiverina indray amin'ny fahatezerana lehiben'i Satana izy.
Asehon'ny Apôk. 17 antsika ny bibidia voaresaka ao amin'ny Apôk. 13:1-8 tamin'ny fotoana nahasitrana ny fery saika nahafaty azy. Rehefa izany dia hipetraka eo amin'ny lamosin'ny bibidia mivolon-jaky i Babilona janga. Izany no maneho fa hikambana indray ny fivavahana sy ny fitondram-panjakana, tahaka izay nataony tamin'ny Vanim-potoana Antenantenany, ary hamely ny vahoakan'Andriamanitra.
Ny loha fiton'ilay Bibidia (Apôk. 17:9)
Vakio ny teny nataon'i Jaona mikasika ilay bibidia mivolon-jaky izay manan-doha fito ao amin'ny Apôk. 17:9-11. Vakio koa ny Apôk. 13:18. Mila saina feno fahendrena isika mba hahatakarantsika ny amin'ireo loha fito. lnona moa no fahendrena resahin'i Jaona? Ahoana no hahazoantsika izany (vakio ny Jak. 1:5)?
Hazavain'ilay anjely amin'i Jaona fa ny loha fito dia tendrombohitra fito. Ny manam-pahaizana mikasika ny Baiboly sasany dia mihevitra ireo loha fito ireo ho tandindon'ireo vohitra fito izay iorenan'ny tana.nan'i Roma. Izany no antony andikanIzy ireo ny teny grika "tendrombohitra" hoe "vohitra". Mpanjaka fito koa ireo tendrombohitra fito ireo. Ampianarin'ny Baiboly fa ny "mpanjaka" dia midika ho "fanjakana" (Dan. 2:37; Dan. 7:17). Misy heviny izany rehefa tsaroantsika fa ny bokin'ny Apôkalipsy dia tsy maneho olona fa fahefana fitondram-panjakana izay manapaka ny tany.
Matetika ny "tendrombohitra" ao amin'ny Baiboly no maneho fahefana na fanjakana eto amin'izao tontolo izao (Jer. 51:25; Ezek. 35:2,3). Hitanao ve fa tsy miaraka resahina ireo tendrombohitra ireo? Inoan'ny mpandinika ny Baiboly maro fa ny tendrombohitra fito dia maneho amintsika fanjakana fito izay nifandimby nanapaka an'izao tontolo izao: Egipta, Asiria, Babilona, Media sy Persia, Grisia, Rôma ary ny fiangonana katalika romanina nandritra ny vanim-potoana Antenantenany. Nampiasa ireo fanjakana ireo i Satana mba hiadiana amin'Andriarnanitra sy hampahoriana ny vahoakany. Tamin'ny fotoana nanoratan'i Jaona ny bokin'ny Apôkalipsy dia efa tsy nanana fahefany intsony ny dimy tamin'ireo fanjakana ireo: Egipta, Asiria, Babilôna, Persia ary Grisia. I Roma, fanjakana fahenina, no nanam-pahefana tamin'izany andro izany.
Ny fanjakana fahafito izay tsy mbola tonga dia ny bibidia ao amin'ny Apok. 13 - ny fiangonan'ny Vanim-potoana Antenantenany tarihin'ny fahefana papaly, izay nifehy sy nampahory ny vahoakan'Andriamanitra, taorian'ny andron'i Jaona sy ny fianjeran'ny fanjakana lehiben'i Rôma. Asehon'ny tantara antsika amin'ny fomba miezinezina ny fahatanterahan'ny faminaniana izay nomena an'i Jaona an-jato taona maro mialoha ny nitrangany.
Hotsaroanao fa ilay loha fahafito dia azon'ny fery izay saika nahafaty azy. Ny loha fahavalo dia fahefana tahaka ilay loha fahafito ihany rehefa sitrana ilay feriny. Amin'izao fotoana izao isika dia velona amin'ny fotoana hahasitranan'izany fery izany. Mandritra izany fotoana izany dia hitaingina ilay bibidia mivolon-jaky ilay vehivavy antsoina hoe Babilona.. Hahazo fahefana maneran-tany indray ilay loha na fanjakana fahavalo, mialoha ny fiafaran'izao tontolo izao, rehefa izany dia horavana izy.
Ny faharavan'i Babilona (Apok. 17:12-15)
Vakio ny Apok. 17:12-15, miaraka amin'ny Apok. 16:12-16. Inona no ampianarin'ireo toko sy andininy ireo antsika mikasika ireo mpanjaka folo?
Marobe ny hevitra mikasika ny hoe iza ireo mpanjaka folo. Azontsika fantarina amin'ny alalan'ilay bibidia mivolon-jaky izay miaraka aminy ireo mpanjaka ireo. Hitanao ye fa mitovy amin'izay ataon'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina ao amin'ny Apôk. 13 no ataon'ilay bibidia mivolon-jaky? Manampy antsika izany hahita fa iray ihany ireo biby ireo, ary koa manampy antsika hahatakatra fa ireo fahefana ao amin'ny Apôk. 13 ihany ireo mpanjaka miaraka amin'ilay bibidia mivolon-jaky. Mialoha indrindra ny farany no isehoan'ireo mpanjaka folo ireo, ny isa folo izay sary an'ohatra maneho fa hanohana an'i Babilona amin'ny fahafenoany ireo fitondram-panjakana ety ambonin'ny tany amin'ny andro farany.
Asehon'ny Apôk. 17:13,14 antsika indray ny adin'ny Hara-magedona. Nianarantsika ny aminIzany ady farany izany tao amin'ny Apôk. 16:12-16. Ny (1) dragona sy ny (2) bibidia avy amin'ny ranomasina ary ny (3) bibidia avy amin'ny tany dia hanao izay hiadian'ny mpanjakan'ny tany amin'i Jesôsy ilay Zanak'ondry. Milaza amintsika izany fa ny ady farany dia tsy hoe ady any Moyen-Orient tsy akory fa ady hifanaovan'i Satana sy ireo mpanaraka azy amin'i Jesôsy sy ireo tafik'anjeliny.
Tsy nanohana an'i Babilona intsony ireo mpanjaka folo (Apôk. 17:16-18). lnona no nahatonga izany (Apôk. 16:2-12)? lnona no nahatonga ny faharavan'i Babilona?
Ny loza farany no nahatonga ireo mpanjaka folo tsy hanohana an'i Babilôna intsony. Feno fankahalana an'i Babilôna ny fon'ireo tandroka folo. Nambaran'i Jaona fa nandrovitra ny akanjon'i Babilôna izy ireo, nihinana ny nofony ary nandoro azy tamin'ny afo. Ampiasain'ny TT ireo sary an'ohatra ireo hanazavana ny fitsaran'Andriamanitra ny tananan'i Jerosalema (Jer. 4:30). Ny fandorana amin'ny afo no famaizana natao tamin'ny zanakavavin'ny mpisoronabe izay mandoto ny tenany amin'ny fijangajangana (Lev. 21:9). Asehon'ny Apôk. 16:10-12 antsika fa fantatr'ireo manam-pahefana maneran-tany izay nanohana an'i Babilôna ny famitahany azy ireo. Ninoany fa afaka ny hiaro azy amin'ny fahatezeran'Andriamanitra i Babilôna . Rehefa hitany fa tsy afaka ny hiaro azy tsy ho tratr'ireo loza fito farany izy, dia namely azy ireo mpanjaka ireo. Amin'ny farany dia samy hotsarain'Andriamanitra i Babilôna sy ireo mpanohana azy. Hihatra aminy ny fahatezeran'Andriamanitra noho ny fitondrantenany feno faharatsiana.
Mialoha ny handravan'Andriamanitra an'i Babilôna, dia misy feo avy any an-danitra mampitandrina ny vahoakan'Andriamanitra izay mbola mijanona ao hiala tao faingana (Apok. 18:4). Asehon'io toko sy andininy io amintsika fa manana olona mahatoky maro Andriamanitra izay mbola ao Babilôna noho ny amin'ny antony maro. Mampiasa ny fiangonany Andriamanitra amin'ny andro farany mba hiangavy amin'ireo olona ireo hiala amin'ny rafi-pivavahana sandoka ary tsy hiombona ota aminy. Tsy maintsy miala ao Babilôna ireo vahoakan'Andriamanitra mba handosirany ny fahatezerany; tsy tiany hisy ho very izy ireo (2 Pet. 3:9). Asehon'ny Apok. 19:1-10 antsika fa marobe amin'ireo olona ao Babilôna izay tia sy mankato an'Andriamanitra no hihaino ny fampitandremany ny amin'ny hisarahany amin'i Babilôna. Maro tokoa ny asa tokony hataon'ny fiangonan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Tsy maintsy mampitandrina ireo vahoakan'Andriamanitra izay mbola ao Babilônaizy ireo mba hisarahany aminy. Inona no ambaran'izany momba ny filantsika ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika?
1. Araka izay asehon'ny Apok. 18:4 dia maro ny olona matahotra an'Andriamanitra ao Babilona ka antsoiny hoe "oloko". Saintsaino izao fanambarana izao: "Tsy maintsy mizara ny fampitandreman'Andriamanitra amin'ny vahoakany izay mbola ao Babilôna isika, kanefa tokony hitandrina amin'izany mba tsy hanosika na hitsara na iza na iza izay tsy mahatakatra ny fahamarinana ananantsika. Tsy tokony hanenjika ny Katalika isika satria maro amin'izy ireny no Kristianina mahatoky tokoa. Mandeha amin'ny hazavana izay aposak'Andriamanitra aminy izy ireo. Hiasa ho fanampiana azy Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra fahafahana hanatsara ny fiainany sy ny fisainany ary ny tenany ireo olon'Andriamanitra ao amin'ny fiangonany amin'ny andro farany, saingy tsy nanao araka izay nolazaina taminy. Tandindonin'ny famaizan'Andriamanitra izy ireo mihoatra noho ireo izay mino ny fampianaran-diso mikasika ny Baiboly, dia ireo izay mino hevi-diso kanefa miaina mba hanao ny tsara ho an'ny hafa." Ev, I. 575, (nasiana fanamboarana).
2. Asehon'ny Apôk. 17 antsika ilay vehivavy mitaingina bibidia mivolon-jaky. Fantatsika to ny vehivavy ao amin'ny toko faha-12 dia maneho ny fiangonan'Andriamanitra mahatoky. Ny vehivavy kosa ao amin'ny Apôk. 17 dia maneho ny fiangonana sandoka izay miezaka mampiodina ny vahoaka amin'Andriamanitra. Inona no mampitovy ireo vehivavy ireo? Inona kosa no maha-samy hafa azy? Zava-dehibe kokoa noho izany, inona no lesona azonao rehefa mijery ireo vehivavy roa ireo? Inona no mampitovy sy maha-samy hafa azy ireo?